Dowladda oo tahriibayaal ku sugan Liibiya Jimcaha soo duulineyso: Sawirro – Warfaafiye:
Dowladda oo tahriibayaal ku sugan Liibiya Jimcaha soo duulineyso: Sawirro
Ali Mohyadin Feb 14, 2018 0
Wafti ka socda dowladda federaalka Somalia ayaa gaaray magaalada Tripoli ee dalka Liibiya, halkaasi oo ay ku dhibaateysan yihiin dhalinyaro Soomaaliyeed oo tahriibayaal ah, kuwaasi oo doonayay inay Yurub ku galaan dopni.
Wafti dowladda ka socda ayaa waxaa hoggaaminayo safiirka Somalia ee Midowga Yurub Cali Saciid Fiqi, wuxuuna sheegay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku dhibaateysan yihiin Libiya, inkastoo aysan u suuragelin inuu booqdo goobaha afduubka loogu haysto iyo xeryaha ay ku jiraan sababo dhinaca amniga ah, maadaama dowladda Libiya aysan ka talin gobolada qaar.
Safiirka ayaa sheegay in Jimcaha ay soo duulinayaan tiro yar oo dhalinyaradii uu la kulmay, kuwaasi oo codsaday in dalkooda lagu celiyo, halka kuwa kale ee gacanta ugu jira magefayaasha ay adag tahay in lala kulmo.
Cali Fiqi ayaa sheegay in Midowga Yurub uu dhaqaale ku bixinaayo dib u celinta qaxootiga, wixii diyaar u ahna ay u fudueynayaan inay dalkooda ku laabtaan.
Tahriibayaasha Soomaaliyeed ayaa dhibaato aan lasoo koobi karin kala kulma tahriibka Liibiya, iyadoo la iibsado, waxaana mararka qaar dhacda in qofka Soomaaliga ilaa seddax jeer la iibsado.